Walaac xoogan oo laga muujinayo xaalada bani aadanimo ee ka ta... | Universal Somali TV
Walaac xoogan oo laga muujinayo xaalada bani aadanimo ee ka taagan gudaha Suuriya
Xaalad bani aadanimo tii ugu darneyd ayaa waxay ka taagan tahay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee dalka Suuriya iyadoo hey,adaha gargaarka ay ku adkaatay in ay caawiyaan dadka go,doonka ku jira iyo kuwa ku barakacay deegaanada colaada ka taagan Tahay.
Sargaal ka mid ah hey,adaha gargaarka ee ku sugan gobolka oo lagu magacaabo Saciid Al-Diin una shaqeeya hey,ad fadhigeedu yahay Turkiga ayaa tilmaamay in dhibaatada ugu balaaran ee heysata dadka barakacay ay tahay in aysan heli karin biyo nadiif daawo iyo raashin Intaba taasi oo adag in waqtigaan la Helo.
Mr Saciid ayaa intaa raaciyay in tirada dhimashada caruurta ay sare u kacday sababo la xiriira cimilada iyo qabowga ka jira deegaanada ay ku Barakaceen, waxaana uu intaa raaciyay in shaqaalaha hey,adaha gargaarka Turkiga ay ka shaqeynayaan sidii hoy ku meel gaar ah loogu sameyn lahaa barakacayaasha Cusub.
Dhanka kale Mr Xabiib Khashouf, oo ka mid ah dallada ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirka gobolka Idlib ayaa xaqiijiyay in dhibaatada ugu badan ay tahay hoy, la,aanta ka jirta xeryaha lagu barakacay taasi oo dhalisay in caruur badan ay xiliyada habeenkii seexdaan meel aan gabaad Laheyn.
Inkabadan 2,000 oo qoys ayaa dhibaato bani aadanimo ay ku heysataa xiligaan deegaanka Jisr al-Shuquur oo ku yaal galbeedka gobolka Idlib kuwaasi oo ka barakacay dagaalka u dhaxeeya milatariga dowlada iyo mucaaradka Hubeysan.
Xaalada bani aadanimo ee ka taagan dalka Suuriya ayaa waxaa uga sii dartay kadib markii gabi ahaanba ay isaga baxeen aagaasi hey,ada gargaarka caalamiga kadib cadaadis amni darro ay soo Wajahay.
Kan-xigaWadamada Afrika oo looga digay korork...
Kan-horeInkabadan 20 qof oo ku dhintay toogas...
54,568,983 unique visits